သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဘယျသို့သောဘေးကင်း - တဲ့လေယာဉ်သို့မဟုတ်မီးရထား? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပိုမိုလုံခြုံသည် - လေယာဉ်သို့မဟုတ်ရထား?
မီးရထား, ပြတ်ပြတ်သားသား .... ဒါဟာ) ကိုရထားနဲ့အစစ်အမှန်ခရီးထွက်လှည့်
Естественно поезд. Обонование — статистика. Потом самолет. Самый опасный — автомобиль.
ရထား။ သူသည်သံလမ်းချွတ်ရောက်လာပြီနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိဆိုပါက .. ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ပေါ် ....
ရထား။ T. ဋ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပျက်ကျမှုရှင်သန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ။ ပြီးတာနဲ့ Zeppelin လည်း nadzhney samoltov ခဲ့ကြသည်ရှိခဲ့သညျ။ အဆိုပါ Hindenburg LZ-129 ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက်လူများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုအရှိဆုံး nadzhny နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသင်္ဘောဘို့သင့်ကိုအလုံအလောက်အသက်ကယ်လှေများမဟုတ်လျှင်။
သို့သော်သင်ရနိုင်သော်လည်းရထား ... ကထဲကချစ်နှင့် Samolt upadt လျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကို =0.... ဦးမည်
အများကြီးပိုလုံခြုံနှင့်ရထားနှင့်ကားများ, ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်အတွက်သင်ဘရိတ်နင်းနှိပ်သို့မဟုတျ, အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ကောင်းမွန်စွာတိတ်တဆိတ်သူတို့ရဲ့သေခြင်းတရားများအတွက်စောင့်ဆိုင်း မှလွဲ. samolte ဘာမျှမနေဖို့အတွက်ပြတင်းပေါက်ထဲကခုန်အားဖြင့်မတော်တဆမှုတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင် Samolt ။ ထို့ကြောင့်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီမဲ့၏အသိအမြင်၏, များစွာသောလူပျံသန်းဖို့ကြောက်နေကြတယ်။
ရထားထဲမှာရထားလုံခြုံရေးတစ်ဦးဘေးအန္တရာယ် 94 သန်းနာရီဆိုလိုသည်မှာ 14 နှစ်ပေါင်းလုံခြုံရေးအပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။ နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာဒီနှစ်မျှသာ 20 သို့မဟုတ် 192ltnyh နာရီ samolte ။
ကျနော့်အမြင်တွင်, ရထား။ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းသာဘဝတစ်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုကိစ္စတွင်အဖြစ်လေယာဉ်ပျက်ကျသတိရ?
Автобус. Но надежной компании. Те что ездат сами и на своих машинах. Как ТурКлуб "НАВИГАТОР" из Питера. Они сами едут и водители свои. Никогда никого левых для экономии не нанимают. Везут как тещу собственную… .
စာရင်းများအရ: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်များ၏လုံခြုံဆုံးပုံစံကိုကျနော်တို့ကယာဉ်မတော်တဆမှုများအံ့သြစရာအရေအတွက်နဲ့သားကောင်များ၏အံ့သြစရာအရေအတွက်က, အကောင်းပြီယူလျှင်။ ။ : ဒေါက်တာ ... ဤနေရာတွင်လည်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အခြားဘေးအန္တရာယ် Naprmer ရေတွက်ဘဲ, အရထားလမ်းနှင့်ပုဒ်အပေါ်တစ်ဦးကူး၏တိုးတက်မှုအပေါ်ဦးသေဆုံးနေကြသည်လူမည်မျှအကောင့်သို့ယူရမယ် (အများကြီးလုံခြုံရေးရှုံး
4 ဇွန်လ (မော်စကိုအချိန်3ဇွန်လ), 1989 Ufa အကြောင်းကိုရုရှားနိုင်ငံ၏သမိုင်းနှင့်ရုရှားနိုင်ငံရထားလမ်းမတော်တဆမှုတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုခရီးသည်များ၏ကျမ်းပိုဒ်၏အချိန်မှာပိုက်လိုင်းအနီးမှတဆင့်ကူးစက်သောအပေါ်မတော်တဆမှုဖွဲ့စည်းတဲ့ကပ်ဘေးဆိုင်ရာပေါက်ကွဲမှုမိုဃ်းတိမ်ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသော Air-လောင်စာဆီအရောအနှောလေ့။ ကွယ်လွန်သွား 575 ကလူ (645 အခြားဒေတာ), bolshshim kollichestvom နှင့်အတူ 600..Takih သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြွယ်ဝပြည့်စုံထက်ပိုဒဏ်ရာရ။ လေယာဉ်ပျက်ကျသေဆုံးသူတို့၏အမျိုးအထိုသို့သောအံ့သြစရာအရေအတွက်ကလေယာဉ်ပျံအဖြစ်ဆိုးဦးသေဆုံးတစ်ခုသာနှစ်အနည်းငယ်အဆမတန်ကနျ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလေယာဉ်အများရှိသော်လည်း, ယခုထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့ smaya ။ ဒါကြောင့်သင်ကလေယာဉ်ပေါ်မရကြလိမ့်မည်ဘယ်မှာစာရင်းဇယားသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကားတစ်စီးပါစေတစ်ဦးတည်း, ပျံသန်းဖို့အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်သာရုရှားတွင်ပင် nehochetsya တစ်နှစ်ပြောနေတာ 35-40t သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ လူတွေ။
По статистике, как это ни странно — самолет. Но на поезде в случае аварии у вас есть шанс выжить, а на самолете, если падаете — шансов ноль.
Posted in, အခွားသောခရီးသွား
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,315 စက္ကန့်ကျော် Generate ။